Hay’adda CAIR oo ka dalbatay waaxda caafimaadka iyo badqabka shaqaalaha in ay baaraan warshada digaaga. – Xogmaal.com
Hay’adda CAIR oo ka dalbatay waaxda caafimaadka iyo badqabka shaqaalaha in ay baaraan warshada digaaga.
By MN	 Last updated May 9, 2020
Hay-ada Xiriirka Muslimiinta Mareykanka oo loo soogaabsho CAIR, qaybteeda gobolka Minnesota ayaa ka dalbatey Hay-adda caafimaadka iyo Badqabka shaqaalaha in ay baaris ku sameyso qatar shaqo oo ay shaqaaluha warshad digaag ay kaga cabanayaan goobaha ay ka shaqeeyaan Kofid 19 dartiis.
Warshadan oo digaaga lagu qalo ayaa ku taalo degaanka Cold Spring ee gobolka Minnesota ee dalka mareykanka.
Qaar ka mid ah shaqaalaha ayaa Cair u sheegay in ay madaxda warshadu ku qasbayaan shaqaale jiran in ay shaqadooda sii wataan. Waxaa kale oo ay cabashada ku dareen in aysan jirin agab ku filan oo ay shaqaaluhu kahortag ahaan u xirtaan, iyo waliba qalabkii markii horeba ay shaqada uxiran jireen oo aan lahayn.
Sidoo kale shaqaalaha ayaa lagu qasbaa in ay koox koox u qaataan xilliyada nasashada, iyaga oo wada isticmaalayo hal goob oo lagu nasto, cuntada iyo cabitaankana loo isticmaalo xilliga gaaban ee nasashada.
Kooxaha ayaa tiro ahaan gaarayo boqolaal marka ay nasanayaan. Goobta nashaduna malahan agabkii lagu nadiifinayey iyo kii la isaga buufin lahaa si fayruska loo la dagaalo.
Jaylaani Xussen oo ah madaxa hay-ada Cair ee gobolka Minnesota ayaa warbaahinta u sheegay in ay ka dalbadeen, OSHA oo ah hay-adda caafimaadka iyo badqabka shaqaalaha, hay-adaha kale ee heer gobol iyo dowlada dhexe ee Mareykanka in ay baaritaan ku sameeyaan shirkadan digaaga ee degaanka Cold Spring, ee Minnesota. Jaylaani Xuseen ayaa hadalka ku darey, waa qatar in ay shirkadu doorbido faa’iido iyada oo shaqaalaha, reerahooda iyo bulshada oo dhan qatar galinayso.
Shaqaalaha uu cudurka ku dhacay ee soo buskoodey ayaa diidey in ay shaqada ku noqdaan, iyaga oo ku doodaya in aysan sugneyn badqabkooda caafimaad oo ay shirkadda ku xireen in ay tilaabo isbadal muuqda ay qaado. Waxaa kale oo ay sheegeen in aysan badqab lahayn cuntada ay sameynayaan marka ay shaqaaluhu xanuunsan yihiin.
Jaylaan Xussen oo ah madaxa hay-ada Cair ee gobolka Minnesota ayaa sheegay in shirkadaha kale ee la midka ah tan ay wanaag badan oo ku aadan ka hortaga Kofid-19 ka maqlayaan.
La taliyihii hore ee Trump Michael Flynn oo la laalay dacwadihii ahaa inuu been u…
© 2020 - Xogmaal.com. All Rights Reserved.